Irreecha: akka mallattoo Aadaa Oromoo fi Oromummaatti | robemedia
Home AfaanOromo Irreecha: akka mallattoo Aadaa Oromoo fi Oromummaatti
Sabni oromoos aadaa fi seenaa mataa isaa, kan saba Kuush waliin walitti hidhatu qaba. Kanneen keessaa sirni Gadaa, kan oromoon ittiin walbulchaa ture bakka guddaa qaba. Sirni Gadaa sirna demokraasii ammayyaa waliin yeroo madaalamu seenaa uummata Afrikaa keessatti kan hiriyaa hin qabne ta’uu fi demokrasii Addunyaan kun yeroo ammaa faaristu waliin kan walqixu ykn kan caalu ta’uutti hubanna.
Irreechaan keenya mallattoo Oromummaa keentaa ti; ayyaana kana otuu addaan hin abhiin waliin baanee waliin Irreechaa Harsadii fi ardaalee Irreechaa mara irratti waloon kabajachuun nhu mara irraa eegama. Waan ta’eef, Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa seenaa kana qalbeeffachuu fi yaadachuun Ayyaana Irreechaa bara 2017, afuura tokkummaa fi gamtaan akka waliin kabajnu, akkasumas fuula dura kanuma akka jabeeffannu waamicha Oromummaa isiniif dhiheessina! Source
Previous articleTigrean leaders deployed mercenary army to terrorize Oromoo in the border lands of Oromia, ID cards found on the dead bodies
Next articleAbadula Gemeda resigned from the apartheid regime
UN experts urge Ethiopia to halt violent crackdown on Oromia protesters,...
TPLF 10 years plan
What amazing determination, see this video, you will see what TPLF...